အဖိနှိပ်ခံတို့ အသံ: ဦးခင်ရွှေ ၏ဖွင့်ဟ ၀န်ခံချက်
ဦးခင်ရွှေ ၏ဖွင့်ဟ ၀န်ခံချက်
အန်ကယ်သိမ်းတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ အစိုးရကသိမ်းတာပါ။ အစိုးရလူကြီးမင်းထဲမှာ တော့ အန်ကယ် ခမည်းခမက်ကြီးက ပါတယ်လေ။ အန်ကယ် က လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် လေ။ သည်တော့ နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေးကို အန်ကယ်လဲ လုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ အခါအခွင့် သင့်တုံး။ အခွင့်အရေးလေး ပေးတုံး အန်ကယ်က အနစ်နာခံ ပြီးတော့ နိုင်ငံတော် အတွက် လုပ်နေတာပါ။ အန်ကယ် မှာ လယ်ကို သိမ်းပိုင်ခွင့် မရှိပါဘူး။ နိုင်ငံတော်က သိမ်းခိုင်းလို့သိမ်းရတာပါ။ နိုင်ငံတော် က နိုင်ငံတော် ပြန်တမ်း မှာ ထုတ်ပြန်ဖို့ မေ့လျော့ သွားဟန်တူပါတယ်။ အန်ကယ်ကို လဲ ဘယ်လို သိမ်းပါ ဘယ်လောက်သိမ်းပါ ဘယ်လို အစီအမံ နဲ့ ဘယ်ဥပဒေ အတိုင်းသိမ်းပါလို့ နိုင်ငံတော် ကြီးက ညွှန်ကြားမူ မရှိတာနဲ့ အဆင်ပြေသလို သိမ်းမိ ရင်း လက်လွန်ခြေလွန် ဖြစ်ခဲ့တာပါ ။
အဲ --ခံပြောမဲ့သူကလည်း မရှိဘူးလေ။ အဲဒါ နဲပဲ အန်ကယ်က ရွှေဖော့ရိုးနဲ့ ဆုံးမပါ ဆိုတဲ့ ထုံးကို နှလုံးမူ ပြီးတော့လေ လည် မျို ကို တက်နင်းမိတော့ တာပါ။ အဲဒါ ကို လယ်သမားတွေ က ဘာမှ မသိပါဘူး။ မသိသလိုနေလိုက်ရင်လည်း ပြီးတာပါပဲ ။ အဲဒါ ကို နေမျိုးဝေ ဆိုတဲ့ သူပုန် က လယ်သမားတွေကို မြှောက်ပေးနေလို့ လယ်သမားတွေ သူပုန်ထနေကြတာပါ။
အခု အန်ကယ့် ကို အနု ကြမ်း စီးခံနေရပါပြီ။ နေမျိုဝေ ကို တရားစွဲ ထားတဲ့ အတွက် နေမျိုးဝေက တရာခံ ဖြစ်နေပါပြီ ။ ရဲက မဖမ်းရဲ နိုင်ငံတော်ကြီး က လှည့်မကြည့်ရဲတာ နဲ့ အန်ကယ်ကိုယ်တိုင် ကြိုး နဲ့ ချည်ပြီး ဖမ်းဖို့ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ ရတာပါ။ အခု လည်း အဲဒီ သူပုန် နေပြည်တော် တက် ပြီး လွှတ်တော် ထဲ ဘာဝင်လုပ်လဲ မသိတော့ပါ။ နိုင်ငံတော် မှာ လည်း တရားဥပဒေ စိုးမိုးမူ မရှိ တော့ ဘူးနဲ့ တူပါရဲ့ ။
လယ်သမားတွေ က အနည်းအကျဉ်းတော့ နစ်နာတာပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံတော် ကြီး ကောင်းစား ဖို့ ဆိုရင် ၀ိုင်းဝန်းပြီး အနစ်နာခံရမယ်မဟုတ်လား။ အန်ကယ်တောင် အနစ်နာခံပြီး စက်မူဇုံတွေ တည်ဆောက်ပေးနေတာ ။ သူတို့က စိုက်ပျိုးမြေတွေအသိမ်းခံရုံပဲ ။လယ်မရှိရင် အိပ်နေလို့ရတယ်။ အန်ကယ်ကသာ နေ့မအား ညမနား နိုင်ပဲ နိုင်ငံတော် ကြီး အတွက် လုပ်ပေးနေရတာ။
နိုင်ငံတော် ကို အုပ်ချုပ်တဲ့ လူကြီးတွေ အတွက်လည်း အန်ကယ်တာဝန်ပဲပေါ့။ သူတို့က ဘယ်လိုလုပ်ရမယ် ဆိုတာ နားမလည်ဘူးလေ။ အလုပ်လုပ်ရင် အမှားတော့ ရှိတတ်တာပါပဲလေ။ လူ့သဘာဝပဲ မဟုတ်လား။ အသံချဲ့ စက်နဲ့ အော်ပြီးမောင်းထုတ်တာ အန်ကယ် မဟုတ်ပါဘူး။ ရ၀တ တို့ မ၀တ တို့ ပါ ၊ အဲဒါ က အုပ်ချူပ်ရေးရာ အဖွဲ့ တွေ လေ၊ အဲသည် အဖွဲ့အစည်းတွေက နိုင်ငံတော် က ခိုင်းလို့ တာဝန်အရ လုပ်ရတာပါ။
ဇေကမ္ဘာ ပိုင်မြေတွေ ဖြစ်လာတာတော့ နိုင်ငံ တော် ကြီး က အန်ကယ့် ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ချီးမြှောက်လို့ ရထားတာပါ။ တစ်ခုပဲ ပြောစရာရှိပါတယ် ။ နိုင်ငံတော် ကြီး က သည်လောက် ကြီးမားတဲ့ စီမံကိန်းကြီး ကို နိုင်ငံတော်ပြန်တမ်း မှာ ထုတ်ပြန်မူမရှိတာရယ်။ အစိုးရအဖွဲရုံးတွေ မှာ အမိန်ထုတ် ပေးခြင်းမရှိတာရယ်ပါ။
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန ရဲ့  အိုးအိမ်ဌာနခွဲက ဂရံထုတ်ပေးတာပေါ့။ အဲဒါ အစိုးရက ခိုင်းလို့ နိုင်ငံတော်က ခိုင်းလို့ ထုပ်ပေးတာဖြစ်မှာပေါ့ ။ အန်ကယ်နဲ့ မဆိုင်ဘူးလေ။
နောက်ပြီး တစ်ဧကကို ငွေ တစ်သောင်းကျပ်လောက်တော့ ရော်ကြေး ပေးမလို့ပါ ။အန်ကယ်လဲ နိုင်ငံတော် အတွက် အနစ်နာခံပြီး လုပ်နေရလို့ ငွေ မလည်တာရယ်၊ နိင်ငံတော်ကသိမ်းတာပဲ ဒီလောက်တော့ လယ်သမားတွေ လည်း တိုင်းပြည်အတွက် အနစ်နာ ခံသင့်တယ် ထင်ပြီး မပေးဖြစ်ခဲ့တာပါ။နောက်တစ်ခုက အိမ်ယာကွက် အဖြစ် ပေ၄၀ ပေ၆၀ အကွက်ရိုက်ပြီးပေးမလို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ မပေးဖြစ်ခဲ့တာ တစ်ခြားမဟုတ်ပါ ။လယ်သမားတွေ က လာမှ မတောင်း ပဲ ဘယ်သူကို ပေးရမယ်ဆိုတာ တိတိကျကျ မသိပဲ ဘယ်လိုပေးမလဲ။ သိမ်းထားတဲ့ စာရင်းကလည်း အတိအကျမှ မရှိတာ ။ ပေးမိရင် စားရင်းတွေ လွဲမှားကုန်မှာပေါ့။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။
တိုင်းဒေ သကြီး အစိုးရအဖွဲ့ က အန်ကယ် ကို လယ်စိုက်ဖို့ ခွင့် ပြုပေးခဲ့တယ်လေ ။ တိုင်းဒေ သကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဆိုတာ နိုင်ငံတော် ပဲလေ၊ နိုင်ငံတော်က ခိုင်းလို့ လုပ်ရတာပဲ ။အန်ကယ်က လုပ်ချင်လွန်းလို့ မဟုတ်ရပါ။ လယ်သမားတွေ လယ်စိုက်ရင် အကြွေး တက် တယ် ဆိုတာနဲ့  လယ်သမားတွေ ကို ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုး မဖြစ်စေရအောင် အန်ကယ်ကိုယ်တိုယ် လယ်စိုက်ခဲ့တာပါ။ အဲဒါ ကို ဟို သူပုန်ပေါက်စ နေမျိုးဝေက ၁၉၅၃ ခုနှစ် လယ်ယာမြေ နိုင်ငံပိုင် ပြုလုပ်ရေး ဥပဒေ ကို ဖောက်ဖျက်တယ် ဆိုလား၊ ပုဒ်မ ၄ ပုဒ်မ ၅ ချွင်းချက် ပုဒ်မ ၁၀ ကို ဖောက်ဖျက်တယ် ဆိုပြီး အန်ကယ်ကို တိုက်ခိုက်နေတာပါ။ သီးစားချ ထားရေး ဥပဒေ တွေ နည်းဥပဒေ တွေ အန်ကယ် ဘယ်သိပါ့မလဲ။ အဲဒီ ဥပဒေတွေ က အလုပ်မရှိတဲ့ ကောင်တွေ ကျက်မှတ် ပြီး တောင်ပြော မြောက်ပြော ပြောနေကြတာပါ။ ကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်တတ် ။သူများလုပ်တာကျတော့ ဥပဒေတွေ နဲ့  လျောက်ပြော ပြီး အပုတ်ချ နေတာပါ။
အော် တိုးနိုင်မန်းဆိုတာ အန်ကယ် သမက်လေ ၊သူရရွှေမန်းရဲ့သားပေါ့ ။ နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေးကို အန်ကယ်ရယ် သမက်ဖြစ်သူရယ် ခမည်းခမက်ကြီးရယ် သားအရင်းဖြစ်တဲ့ ဇေသီဟ တို့က နေ့မနား ညမအား ဆောင်ရွက်နေတာပါ။ သည်လောက်လုပ်နေတဲ့ ကြားက အပြစ်ပြောခံရတယ် ။ အုပ်ချူပ်ရေးရာ အဆင့်ဆင့် က နိုင်ငံတော်ကြီးအတွက် လုပ်နေတာပါ။ အန်ကယ်အတွက်မှ မဟုတ်ပဲ ။ အုပ်ချူပ်သူ အဆင့်ဆင့် က လုပ်သင့်တာ ကို လုပ်တယ် မလုပ်သင့်တာ မလုပ်ဘူး ။အဲဒါ ကို နေမျိုးဝေ ဆိုတဲ့ သူပုန်က မလုပ်သင့်တာကို လုပ်လို့ အဂတိလိုက်စားတယ် လို့ ဆိုတော့ အန်ကယ် ဘယ်လိုပြောရမယ်မှန်းတောင် မသိပါဘူး။
အန်ကယ် က နိုင်ငံတော် နဲ့ ပြည်သူလူ ထု သဘောကြ လို့ ရွေးချယ် တင်မြှောက်လိုက်တဲ့လွှတ်တော် ကိုယ်စာလှယ်ဆို တိုင်းသိ ပြည်သိ နိုင်ငံသိပါကွယ်။ လွှတ်တော် ဥက္ကဌ လုပ်နေ တဲ့ ခမည်းခမက်ကြီးကလည်း ပြည်သူ့လူထု က ရွေးကောက် တင်မြှောက် ထားတာလေ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ် ဖြစ် အန်ကယ် မှာ အပြစ်မရှိပါဘူး ။
သူပုန်ဗိုလ် နေမျိုးဝေနဲ့ လယ်သမားတွေ သာ အန်ကယ် ပိုင်မြေတွေကို အခု အနုကြမ်း စီးထားတာလေ အန်ကယ် က ဥစ္စာ ပစ္စည်းကို မမက်မောပါဘူး သေရင်ထားခဲ့ရမယ်မဟုတ်လား။ လယ်သမားတွေက သာ ကိုယ်သေ ရင် ထာခဲ့ ရမဲ့ လယ်တွေကို မက်မောနေကြတာပါ။ ပြန်ရောင်းစားပြီး ဆိုင်းပုဒ် ထောင်တာက ဥပဒေ ချိုးဖောက်တာမဟုတ်ပါဘူး ။ အန်ကယ် မှာ ပိုက်ဆံမရှိလို့ပါ။ နိုင်ငံတော်အတွက် အနစ်နာခံလုပ်နေရတာကိုး။ ဆိုင်ပုဒ် မထောင်ပေးရင်းလဲ ၀ယ်တဲ့သုက မယုံလို့ ငွေ ကို အပြည့် အ၀ ချေပေးဘူးလေ။ အဲသလို လုပ်ရုံလေး နဲ့ဥပဒေ ချိုးဖောက်တာ ဆို တော့ အန်ကယ် ဘယ်လိုပဲလုပ်နေ နေ အပြစ်ပြောနေကြမှာပါ။
လန ၃၉ ဆိုလား ဘာလား ။အဆောက် အဦးဆောက်လုပ်ခွင့်မရပဲ ဆောက်မိတာ အန်ကယ် တစ်ကယ်မသိလို့ပါ။ သိရင် လန၃၉ ရအောင် အရင်လျောက်ထားတာပေါ။ မသိလိုက်လို့ အပြောခံ တာ ပါ။ အဲသလိုကြီး ဥပဒေ တွေ ဘာတွေနဲ့ ပြောမဲ့လူ ရှိတယ်လို့မှ မသိပဲ။ သိများ သိခဲ့ရင် အခုလောက်ကြီး မလုပ်မိပါဘူး ။စနစ်တကျ သိမ်းလိုက်မှာ ။အခုတော့ အဆင်ပြေသလို ရောကြိတ်လိုက်ရတာပေါ့လေ။
တရားရုံးတော် မှာ စက်မူဇုံ တည်ထောက်ခွင့် ရှိမရှိရယ် ။လယ်ယာမြေ သိမ်းယူ ခွင့် စတဲ့ ခွင့်ပြုမိန့် ရှိမရှိရယ် အဲသည့် ခွင့်ပြုမိန့်တွေ မပြနိုင်တာကတော့ အန်ကယ်မှာ တာဝန်ရှိပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ပေါ့လေ အဲဒါ ကြီးက နိုင်ငံတော် ရဲ့  လျို့ဝှက်ချက်ဥပဒေ ဆိုလား ဘာလားပဲ ။ အဲသည့် ဥပဒေ ကြီးက ပြလို့မရဘူးဆိုပဲ။။ အန်ကယ်မှာတော့ မရှိတာ အမှန်ပါ။ အဲဒါ ကိုပဲ အပြစ်ပြောနေကြတာပါ။
အန်ကယ်က စပါး မျိုးအောင်တယ်မအောင်ဘူး ဘယ်သိပါ့မလဲ။ လယ်သမားမှ မဟုတ်တာ၊ နိုင်ငံတော် ကြီးက လယ်စိုက်ဖို့ပေးလို့ စိုက်ပေးရတာပါ။ စပါးစေ့ ကျဲရင် စပါးပင်ပေါက်တယ်လောက်ပဲ သိတာပါ ။ အဲဒါ ကို လည်း အပြစ်ကြီးတစ်ခုလို လယ်သမားနဲ အပြိုင် လယ်လု တယ် ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ အဲသလို လူတွေ ရှိနေလို့ မြန်မာပြည်ဆင်းရဲတာ။ မြန်မာလူမျိူးတွေ မကြီးပွားတာ။ ငတ်နေကြတာလေ။ အပြစ်ပဲ တင်ချင်ကြတယ် ကိုယ်က ဖြစ်အောင်တော့မလုပ်နိုင်ဘူး လုပ်နိုင်တဲ့သူကို လဲ ဝေဖန်ချင်ကြတယ်။
Posted by Wai Lin Aung at 8:41 PM
saw kyow saw kyow moe February 11, 2013 at 10:45 PM
ဦးခင်ရွှေ နိုင်ငံတော်ကြီး ကလုပ်ခိုင်တာ..ပြီးတော့ နိုင်ငံတော်ကောင်းစားဖို့ဦးခင်ရွှေကနေ့မအားညမအားလုပ်ခဲ့တာကနိုင်ငံတော်အတွတ်ဆိုရင် ကျနော်ပြောချင်လို့ပါ။ ဦးခင်ရွှေတို့ လုပ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတော်ကြီးက ကမ္ဘာအလယ်မှာရွှေနိုင်ငံကနေ ဖာ နိုင်ငံမဖြစ်ခဲ့တာ ကံကောင်းတယ်လို့ကျနော်ထင်မြင်မိတယ်။ ကျနော်နောက်ထပ်ဘာမှမပြောတော့ပါဘူး မိမိပြုတဲ့အမှု မိမိပဲသိတယ်လေ။ အရှပ်မရှိတဲ့စကားတွေ မပြောနေပါနဲ့ဗျာ...။
saw kyow saw kyow moe February 11, 2013 at 10:46 PM
thae oo Nge February 12, 2013 at 9:03 AM
အော်... လယ်မရှိရင် အိပ်နေလို့ရတယ် တဲ့ လား.... ဒါဆိုရင် သူတို့ဗိုက်ဆာတဲ့အခါ ဘယ်သူ လာကြွေးမှာလဲ
ဌေးလွင်ဦး ရဲ့ ငါတို့ရဲ့ ဦးတည်ချက်
အဖ ဗိုလ် ချူပ် ဘာကို လုပ်မည် မေးပါရစီ
All Golfers, especially foreigners !
လွှတ်တော် အမတ်မင်း ခရိုနီ ခင်ရွှေ ၏ ကျဆုံးခန်း အကြ...
The Hot News Weekly Journal | Tag Archive | ဆောင်း...